Iintyatyambo zepum ekhaya, iimpawu zonyango
Impilo yabasetyhini Isondlo esifanelekileyo
Phuma ekhaya (ngesiLatini izandile njengePrunus domestica L.) - le shrub okanye umthi omkhulu. Ukuphakama kwepumu kunokufikelela kwiimitha ezintandathu. Kwaye ngamanye amaxesha amapulum akhula kwaye angaphezu kwama-10-12 emitha. Iintlobo ezahlukeneyo zeplums zihlukileyo kunye neziqhamo, imilo yazo ihlukeneyo, njengokuba kunjalo, kodwa, ubukhulu nombala. Isiqhamo se-plum sibonakaliswa ngobumnandi be-pulp kunye nobukho beethambo elliptical. Iiplums ezenziweyo azikhulanga kwintlango. Iplum isiphumo se-hybridogenic genesis. Le ntlobo ibonakale ngenxa yesigxina esingenangqungquthela (i-hybridization) ye- Prunus divaricata i-Ledeb - i-plums cherry kunye nameva (kwi-Latin alphabet- Prunus spinosa L.). Oku kuye kwadala kuqinisekiswe ngabadlali bezityalo kunye nama-cytologists. Iinkcukacha ezongezelelweyo malunga nesi siqhamo esihle siya kuxoxwa kwinqaku lemihla "Iziqhamo zepum ekhaya: izixhobo zonyango."
Kukholelwa ukuba le ngxube ye-Caucasus ephumelele kakhulu yenzeke kwiindawo apho ukujika kunye ne-plum, bobabini abazali bepum, zifumaneka kwintlango kakhulu. I-hybrid, eyaba yinto emikhulu, enamanzi kwaye ehlwayekayo, eyahluke kuyo "kubazali" bayo, yabonwa ngokukhawuleza ngabantu abaqala ukuyizalisa ngesivinini esheshayo. Ngoko, ngokukhawuleza, ngale ndlela, ngexesha elidlulileyo iphampu ibonakala. Kwaye sele kamva i-plum yaqala ukuzalisa kwiindawo ezikufutshane, nangona kamva-kwiindawo ezikude.
Iprogram: ukusetyenziswa koqoqosho.
Isiqhamo se-Plum sinokufikelela kwi-17% yeentlobo zeeshukela: i-glucose, i-fructose, i-sucrose (ukuya ngaphantsi). Ziqukethe i-pectin (ukuya kwi-2%), i-acids (i-citric, i-apple), i-tanning (ayikho ngaphezulu kwe-1%) kunye nezinto zokubala. Ziqukethe i-carotene eninzi (i-provitamin "A"), iivithamini ezahlukahlukeneyo (C, P, B), i-potassium isalts kunye nezixhobo zenye izinyithi. Imbewu inokuqokelela, malunga nama-42% wamafutha anamafutha. Iziqhamo zeepummi zidliwa kwaye zihlaziye kwaye zisoloko zicutshungulwa: zipheka i-jam ecoliweyo, zenza isobho seziqhamo, iwayini, i-jam, i-liqueurs, i-pastille, i-sauce, ijusi, i-marmalade ... Iiplums zibekezela ngokukhululeka, zigcina zonke izondlo.
I-Plum: ixabiso lemithi, amayeza.
Abaphili bamandulo babesebenzisa iglue kwiipums, iziqhamo, i-gom, amaqabunga. I-Plum isicetyiswa njenge-laxative, choleretic, indlela yokubuyisela. Iiplums ekusebenziseni kwabo basebenzisa uVicenna (inkulungwane ye-11), u-Abu Mansour (inkulungwane ye-10). I-plum glue yayicingwa kakhulu, yayisetyenziswa ukuphilisa i-stomatitis.
Oogqirha babantu basebenzisa iziqabana kunye neziqhamo zeepum ngokwabo. Kwaye amaqabunga aqokelelwa ukususela ngoMeyi ukuya kwinyanga yokuqala yehlobo, kunye neziqhamo - kude kube ngu-Agasti. Iiplums zinokuphucula isondlo, ngokuqhelekileyo, ukugonya, ziyi-laxative ekukhanyeni. Ziluncedo ekubambeni, ingakumbi engapheliyo, isifo sesifo, i-rheumatism, i-atherosclerosis.
Iqokelelwe kwiqela elibizwa ngokuthi "isiHungary", iintlobo ezimnyama ezifakwe kwi-plum zibizwa ngokuba yimifuma. Iintlobo ezomileyo zenza iincomputer ezilungileyo, kodwa zisetyenziswa kakhulu kumayeza. Iishukela kunye ne-prune ziyaba negalelo ekunyuseni kwamathumbu emathunjini. Ukusetyenziswa kweepumu njenge-laxative iyilula: kufuneka udle iiplamu ezingama-20 ngaphambi kokulala, kwaye umphumo we-lax wezokwelapha awuyi kuthatha ixesha elide.
Ukuphonywa akukwazi nje kuphela umphumo wokuphumula. Iyakususa i-cholesterol eyimfuneko emzimbeni wethu, ngoko isetyenziselwa i-atherosclerosis kunye nezilonda ze-gallbladder. Ukunyathelisa iziqhumane kunceda ukususa i-exclusile yeryuwa kunye ne-liquid excess. Yingakho i-prunes ikhuthazwa ngeengxaki zegazi eziphezulu kunye nezifo zengqondo. Iyeza leTajik libonisa ukuba ipham ikwazi ukuhlambulula umzimba womntu, ukunciphisa ukubetha.
Ukuba i-cholesterol ye-metabolism iphukile, kufuneka uthathe kathathu ngosuku ukuya kwi-100 ml ye-plum ijusi okanye ijusi esuka kwiplum yasekhaya, uyihlambe nge-spoonful honey.
I-Plum ayifanele isetyenziswe ngabo bahlanjelwa ukukhuluphala, isifo sikashukela, i-asidi yesero esiswini.
Sichitha amaqabunga omile wepum ekhaya (inokwenzeka kwaye intsha) kwaye sisebenza kwiilonda, izilonda ukukhawuleza ukuphilisa. Impembelelo enkulu yokuphulukisa i-tincture yamacembe eeplamu kwiviniga, esoloko ihlanjululwa yizilonda ezikhulayo, amanxeba angaphilanga ixesha elide.
Siyabilisa iziqhamo kwi-ubisi, sithathe amathambo. Ifom eshushu, sigqoke iifowusi, xa iplum ipholile, kufuneka uyibuyisele ngokutshisa. Ukulahla iifowusi kuqinisekisiwe.
Ukulungiswa ngokusekelwe kwizityalo zameva kunokuba nefuthe lexate (ikakhulukazi iintyatyambo), i-antibacterial and expectorant. Bayakwazi ukuphucula imisipha ephosakeleyo, ukunciphisa ukuguguleka kweesetyhula. Kwi-diarrhea ebangelwa zizizathu ezahlukahlukeneyo, iipropati eziphazamisayo zeziqhamo zeplum zivame ukusetyenziswa. Iintyatyambo, ezineempembelelo ezichasene neziqhamo, zenza ngokungaqhelekanga, zinyanzelise ukulawula intestinal peristalsis kunye nokunciphisa iidumbu zesibindi. Zinefuthe elihle kumsebenzi weenkqubo zokuxilisa umzimba.
Ukulungiswa kweentyantyambo zeplamu kunokunceda kwizifo zesikhumba, izilwanyana, umonakalo wezintso, i-bladder. Zisetyenziselwa i-neuralgia, i-dyspnea, i-nausea, i-bloating, i-intestinal colic.
Ukutyhulwa kweentyantyambo ze-plums kunxiliswe kunye nezilonda zezintso, i-dermatoses, ukuvuvukala kwesibindi, njl.
I-tincture ye-bark ye-plum isetyenziselwa i-malaria, isifo sohudo, i-erysipelas, kunye ne-douching.
I-plum ijusi iyonakalisa ilula, kuquka lamblia.
Abo bachitha ixesha elininzi kwindawo yokuhlala bacetyiswa ukuba baphuze itiye kumaqabunga eplamu.
Ukunyuswa kwamagxolo. Ukuze ulungise i-decoction kwi-plum bark, thatha isipuni sezinto ezibonakalayo uze uthele iglasi yamanzi (eshushu), ubilise, usebenzisa ibhati lokuhambisa amanzi ngamaminithi angama-30, ngokusebenzisa isihlunu se-gauze uze udibanise. Yiphucula umhluzi ngamanzi kude kube yimeko yangaphambili. Thatha umhluzi kufuneka ube yingqayi yesithathu kathathu ngosuku kwisisu esingenalutho.
Ukuxutywa kwamaqabunga eepum . Ilungiselelwe ngokubala iglasi yamanzi (eshushu) kwitafile yeetafile zamacembe. Dlulisa enye kwenye kwaye uzisa kwi-thumba, ubilise imizuzu eyi-15, ulinde ide ipholile, ihlanjululwe kwivolumu yangaphambili ngamanzi. Phuza kathathu ngosuku ngomlinganiselo wesiqingatha kwisisu esingenalutho.
Ukuxhamla kweentyatyambo zeepum. Xa iphekwe, i-25 g yeentyatyambo ithululelwa ngeglasi yamanzi abilayo, igcinwe njengehayiti eqhelekileyo. Phuza indebe yesithathu phambi kokutya kathathu ngosuku.
Isityalo kunye nejusi ngumkhiqizo ococekileyo ophucula ukondla, ukwandisa inkqubo yokugaya, kuphucula umzimba ngezinto zevithamini.
I-plum iboniswa rhoqo kwizifo zentliziyo, izilonda ze-vascular, ne-anemia.
Ukungqinelana. Iiplums kubantwana zingabangela uhudo, ngoko ke oomama abangabongikazi kufuneka baqaphele ukuba bangadli iziqhamo ezingenamkhawulo. Ukuba iintsana, ngenxa yokungena komama we-plums, zine-diarrhea, zaqala ukugungqa isisu, ngoko kufuneka zinike i-dill-water.
Izithelo ezomileyo - iivithamini zendalo kwimpilo
Kubaluleka kweengcambu zemifuno ebomini babantu
Ungayiyeka njani ukubamba uxinzelelo?
Ndiyakutya inkukhu yenkukhu?
Iimpawu kunye nesondlo esifanelekileyo kumhlaza
Iipropati ezifanelekileyo zerayisi yaseJapan
Iimveliso ezili-10 ezichasayo
IHoroscope yeCanscer-Abafazi ngoDisemba 2016
Inkukhu ipake ngeeqathe
Ndifuna isisu esisisigxina
Kutheni sifuna ingqondo yokuvumba kwaye ilawula njani ubomi bethu?
Ukutyelela ngokuncinci: iipropati kunye neendlela zokupheka
USergei Lazarev wenza umkhosi we-gay e-Stockholm, ividiyo
Khetha iwayini elungileyo
Izipho zomtshato zeendwendwe ezisuka kutshatweni
Susa ukukhathala kwizandla: gymnastics, massage, baths
Isibikezelo sezulu seveki kaNovemba 20-26 eMoscow naseMoscow
Indlela yokuba yiplastiki ngaphezulu?
I-recipe ye-cookie yokutya i-curd yokunambitha kunye nemifuno evela kwingcali yefestile uEvelina Khromchenko
Imveliso equkethe i-omega-3 fatty acids
Amanzi enyunyela ukuphathwa kwamehlo
I-tartar ipake inyama
Ikhekhe le-nut ngekhamera yekhofi